Shopify Ebe Ahịa nke Ahịa Inlọ Ahịa | Martech Zone
Fraịde, Septemba 6, 2013 Sunday, Eprel 26, 2020 Douglas Karr
Maara na ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ siri ike mgbe usoro gị na-aghọ ihe ochie n'ihi ụlọ ọrụ ịntanetị na-arụ ọrụ azụ. Nke a bụ Point nke ụlọ ọrụ ahịa. Mgbe m rụrụ ọrụ na mkpọsa nkà na ụzụ na afọ ole na ole gara aga, na naa ụlọ ọrụ ndị mara mma nke ukwuu thugs. Anyị chọrọ iso ha rụọ ọrụ ma sonyere ha, mana ha hụrụ anyị dị ka ihe iyi egwu wee gbochie anyị. Ihe ka ọtụtụ n'ime ya nwere ike ịbụ n'ihi na teknụzụ ha dị egwu. Ha ka na-arụ ọrụ na ihu ihu ihu na ihu nkwanye nzuzo dị na 199x, nwere nnukwu nsogbu nchekwa, ma azụmaahịa ha mara mma na-ere kọmputa desktọọpụ nwere ihu igwe ugboro atọ karịa ka ha bara uru.
Enwere m obi ụtọ ịhụ mmepe a na Engadget, Shopify na ngwa ahia agbakọtara ọnụ na ntanetị ahịa na ntanetị.
Shoplọ ahịa POS bụ ngwa iPad nke na - enye gị ohere ire ngwaahịa ụlọ ahịa Shopify gị na anụ ahụ, mkpọsa ahịa. POS na-eme ka njikọta na mmekọrịta niile dị n’etiti na ntanetị adịghị mkpa n’ihi na ngwaahịa niile, ndị ahịa na iwu niile nọ n’otu ebe - ntanetị.
Ndị na-ere ahịa agaghịzịkwa achọpụta ọtụtụ ngwa ahịa, katalọgụ ngwaahịa, na sistemụ ịkwụ ụgwọ. Shopify jikọtara akụkụ niile nke azụmaahịa gị na otu ikpo okwu dị mfe iji na-abịa na kaadị swiper maka ịnabata VISA, MasterCard na American Express kaadị akwụmụgwọ. Site na onye na-agụ kaadị ha, ị na-enwetakwa ọnụego ịkwụ ụgwọ dị ukwuu - 2.1% + 30 cards na kaadị akwụmụgwọ niile. Enweghị ụgwọ zoro ezo ma ọ bụ ụgwọ dị mgbagwoju anya.
Nwere ike nweta nkwalite gị isi nke ire ere na ngwaike Ezubere maka Shopify POS, gụnyere onye na-agụ kaadị akwụmụgwọ, drawer ego, nkwụnye iPad na ngwa nbipute. Onlinetụ online na mbupu bụ free.
Onwe m, ọ na-amasị m ịhụ nke a. Enweghị m ike ichere ruo mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ POS ndị ahụ na-enweghị ahịa maka ịgwọ ndị ahịa ha na ndị mmekọ ha nnukwu.
Tags: ebe ahịanaaụlọ ahịa